पत्रकार महासंघ निर्वाचनका जिउँदा सहिदहरु – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
पत्रकार महासंघ निर्वाचनका जिउँदा सहिदहरु
२०७० फाल्गुन २५, आईतवार ०२:२९ गते
सामान्य ज्ञानमा एउटा प्रश्न छ– नेपालका जिउँदा सहिद भनेर कसलाई चिनिन्छ ? उत्तर आउँछ– सिपी मैनाली । सामान्य ज्ञानमा यो प्रश्न त्यत्तिकै सोधिएको होइन । खासमा सिपी मैनाली अर्थात् नेकपा मालेका सदाबहार अध्यक्ष साँच्चैका जिउँदा सहिद हुन् । यस मानेमा कि उनी झापा आन्दोलनका एकमात्र जिउँदा सहिद हुन् । राजनीतिमा पनि उनी लगभग जिउँदा सहिद नै हुन् । किनकि, उनका चेलाचपेटाहरुले प्रधानमन्त्रीसमेत पड्काइसके । कति बारम्बार नेपालको शक्तिकेन्द्रहरुमा छाइरहेका छन् । उनी बराबरको हैसियत नै नभए पनि चेलाचपेटाको छायाले उनी छोपिएका छन्, अर्थात् जिउँदा सहिद भएका छन् । नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका महारथी सिपीलाई कम्युनिस्टका बीपी भने पनि हुन्छ । तर, उनी मालेजस्तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भएको पार्टीका सदाबहार अध्यक्ष हुँदाहुँदै पनि समानुपातिकमा केन्द्रित हुनु परेको छ । यो जिउँदो सहिदकै पुनरावृत्ति हो । खैर, यो एउटा उदाहरण मात्रै हो । कम्युनिस्टका सिपी र कांग्रेसका बीपीमा अहिले नजाऊँ ।
नेपाल पत्रकार महासंघको जिल्ला अधिवेशन भर्खरै सकिएको छ । तर, चुनावको ‘ह्याङओभर’ भने अझै पनि बाँकी नै छ । यो चुनावमा पनि धेरै होनाहार पत्रकारहरुले सिपीकै नियति भोग्नुप¥यो । काजीहरुसमेत जिउँदा सहिदमा कहलिए । चुनाव जित्न सट्टेबाज गर्नेहरुसमेत नराम्ररी चिप्लिएर सहिद बने । पत्रकार महासंघभन्दा पनि पुरानो र बलियो संगठनभित्रका हस्ती मानिएकाहरुले जिउँदो सहिदका नाममा सम्मान पाए । कोही एकैपटक ‘डबल सहिद’ भए । कोही ‘डरपोक’ सहिद ठहरिए । र, कोही ‘स्वतन्त्र’ सहिद कहलिए । सञ्चार मालिकदेखि सालिकसम्मले सहिदको उपमा पाए । चुनावमा हारेर ‘ह्याट्रिक’ गर्नेदेखि पहिलो इन्ट्रीमै ‘गोल’ खानेले जिउँदो सहिदकै उपमा पाए । उनीहरुमध्ये केहीलाई शुभचिन्तकहरुबाट जिउँदो सहिदको सम्मानस्वरुप अबिरजात्रासमेत गरिएको थियो । भलै, अबिर लगाउनेहरु मस्त निद्रामा नै किन नहोऊन् ।
पत्रकारको चुनाव संविधानसभाको भन्दा कम चर्चित भएन । विभिन्न पार्टीका पत्रकारबीच चुनावी प्रतिस्पर्धाले चितवन मात्रै तताएन, केन्द्रका नेताहरुलाई समेत अत्याइदियो । हार्नेभन्दा जित्नेहरु नै बढी आत्तिए । अझ, गैरपार्टीका स्वतन्त्र उम्मेदवारले चुनाव जितेपछि त पार्टी प्रमुखहरुले जिल खाए । पत्रकारहरुबीच हातपात मात्र नभएको हो, हुनुपर्ने केही बाँकी रहेन । हार्नेहरुले यसै हारेर सहिद बने, जित्ने भनिएका समेत जिल्लिएर हारे । बाजेलाई जिताउन बाहरु, भिनाजुलाई जिताउन सालाहरु, काकालाई जिताउन भतिजहरु परिचालित भए पनि परिणाम ‘गोलखाँडी’ आयो । काजीसापहरु चुनावी नतिजाअघि नै परिणाम स्वीकार गरेर अलप भएका थिए । कतिले मन नलागेरै भए पनि लोकतान्त्रिक आचरण देखाउनु परेको थियो । पुराना पत्रकारदेखि पीडित पत्रकारसम्म, नवप्रवेशी पत्रकारदेखि अवकाश प्राप्त पत्रकारसम्मलाई चुनावी भूत चढेको थियो । जित्नैपर्नेहरुले त यसै जिते र नजित्नेहरुले समेत जिते ।
कतिले रातभर श्रीमती कुराए, कतिले श्रीमान्को निद्रा टुटाए । कतिले लालाबालाहरु भोकै सुताए । दिउँसै किनेर राखेको अबिर र बिहानै उनेर राखेको माला प्रयोगमा आएनन् । कतिले त घरमा पुग्ने बेला आफैँ अबिर दलेर इज्जत धाने रे भन्ने पनि सुनियो । अधिवेशनअघिको प्रचारशैली हेर्दा जिउँदा सहिदहरुले भारी मतले चुनाव जित्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, नतिजा उल्टो भइदियो । सपनामा पनि नसोचेको परिणाम आएपछि काजीहरु नमज्जाले निराश भए । अनपेक्षित परिणामबाट हुन सक्ने सम्भावित घटनालाई मध्यनजर गर्दै शुभेच्छुकहरुले पानीको भरपूर प्रबन्ध गरेका थिए । मनमा ताप उत्पन्न भए पनि पानीको सहाराले शरीरको तापक्रम सन्तुलित बनाइरह्यो । यो निर्वाचनले एउटा गतिलो सन्देश दिएको छ कि यति दशकअघिदेखि पत्रकारिता गरेको भनेर चुनाव जितिँदो रहेनछ, न त यति दर्जन पत्रकार जन्माएँ भन्ने अहम् बोकेर नै चुनाव जित्न सकिने रहेछ । सञ्चार संस्थाको मालिक नै भए पनि चुनावी नतिजाले माया गर्दो रहेनछ । ‘मैले पत्रकारिता गरेको तिमी नजन्मँदै हो’ भनेर नवोदित पत्रकारहरुलाई दुहाइ दिए पनि चुनावमा अनुभवले भन्दा भोटले ज्यादा मह¤व राख्दोरहेछ । एउटा क्रियाशील पत्रकारको परिचयभन्दा दलनिकटको प्यानलले बढी अर्थ राख्दोरहेछ । संविधानसभाको चुनावमा राजनीति गरेर कपाल फुलाएकाहरुलाई फुच्चेहरुले जितेर देखाइदिएजस्तै, पत्रकारिताको गुरूहरुलाई चेलाहरुले हराएर एउटा गतिलो पाठ पढाइदिएका छन् ।
यसले हामीलाई जिउँदो सहिदको उपमा दियो भनेर कत्ति पनि चित्त दुखाउनु जरूरी छैन । नेपालमा सहिदहरुको कति मान र सम्मान छ– त्यो त कि वास्तविक सहिदहरुलाई थाहा छ, कि त जिउँदा सहिदहरुलाई । कुनै त्याग, तपस्या र बलिदानी नगरी जिउँदो सहिदको उपमाबाट विभूषित हुन पाउनु कम हर्षको कुरा हो र ? नेपालमा वास्तविक सहिदहरुको अस्तित्व खोज्नुपर्ने अवस्था देखिए पनि इतिहास मेट्न खोजेर मेटिन्न । नेपालमा विभिन्न कालखण्डमा हजारौँ सहिद बने पनि चार महान् सहिदहरुको नाम हरेकलाई मुखाग्र छ । दशरथ चन्द, गंगालाल, धर्मभक्त र शुक्रराजलाई सहिद दिवसमा एक दिन स्मरण गरेर श्रद्धापूर्वक सम्मान गर्ने गरिन्छ । सहिद जिउँदो हुन् या दिवंगत, उनीहरुको आफ्नै अस्तित्व छ र रहिरहने नै छ । पत्रकारहरु पनि थुप्रै सहिद भएका छन् । उनीहरुले पत्रकारिता गरेकै आधारमा ज्यान गुमाएर ‘पत्रकार सहिद’ बनेका हुन् । तर, यहाँ त केहीले भोटमात्र गुमाएर पनि जिउँदा सहिदमा दर्ज हुने सौभाग्य प्राप्त गरेका छन् । नियालेर खोज्ने हो भने एउटै प्रतिष्ठानबाट चार जनासम्म जिउँदा सहिदहरु भेटिन गाह्रो पर्दैन ।
एक महिनाअघिदेखि चुनावी सरगर्मीले चितवनमा हावा पनि राम्रोसँग बहन पाएन । यसपालि गर्मी चाँडै सुरू हुने संकेत देखिएको छ । यस्तो हुनुको पछाडि चितवनका पत्रकारहरुको चुनावी तापक्रमको प्रभाव नै कारक मान्न सकिन्छ । चुनावी प्रतिस्पर्धामा होमिएका पत्रकारहरुलाई एक सातादेखि खानासमेत रूचेको थिएन । निद्रा लाग्ने त कुरै आएन । र, चुनावी नजितापछि पनि यही समस्या यथावत् नै छ । चुनावको माहोल हेर्दा यस्तो लाग्थ्यो– ‘जित्नेहरु सीधै संविधानसभामा जान्छन्, संविधान लेख्छन् र सरकारसमेत चलाउने हैसियत राख्छन् ।’ तर विडम्बना, उनीहरु अपजसे ठाउँमा जाँदैछन् । संविधान होइन, समाचारै लेख्दैछन् र सरकार होइन, परिवार (संस्था) चलाउँदैछन्् । उनीहरुलाई घर बनाउने, परिवार व्यवस्थित गर्ने र राम्रो संस्कारले परिवारलाई अघि बढाउने जिम्मेवारी छ । त्यो काम उनीहरुको कार्यकालमा पूरा गर्ने चुनौती थपिएको छ ।
चुनाव भनिसकेपछि र प्रतिस्पर्धामा उत्रिइसकेपछि हारजितको प्रसङ्ग उठ्नु स्वाभाविकै हो । पक्ष र विपक्षबीच नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्न अभ्यास हुनु कुनै नौलो कुरा पनि होइन । अन्ततः प्राप्त परिणाम स्वीकार गर्नु र विजयी हुनेहरुसँग हातेमालो गरेर अघि बढ्नु जिम्मेवार पत्रकारहरुको दायित्व हो । तर, संविधानसभाभन्दा पत्रकारहरुको चुनाव दुई कुराले मात्र भिन्न देख्न पाइयो । एउटा, पत्रकारको चुनावमा बजेटको चलखेल भएन, अर्थात् जग्गा नै बेचेर भए पनि चुनाव जित्नैपर्ने रोग देखिएन । र, अर्कोचाहिँ उम्मेदवारहरुलाई खसेको मत संविधानसभाका उम्मेदवारहरुको जस्तो ‘जमानत जफत’ नै हुने खालको चाहिँ आएन । फेरि आफ्नो मात्रै एक भोट आए पनि पत्रकारको चुनावमा जमानत जफत हुने विधि–विधान छैन ।
यसपल्ट पनि स्तम्भकार स्वयंले जिउँदो सहिद बन्ने अभूतपूर्व मौका पायो । यस अवसरमा मत नदिएर ‘खुँडा’ हान्ने र अमूल्य मत हाल्ने सबैप्रति आभार प्रकट गर्दछु । आगामी दिनमा पनि यही सम्मान कायम राख्न सम्पूर्ण जिउँदा सहिदहरुका तर्फबाट अपेक्षा राखेको छु । नयाँ नेतृत्वले फागुन ४ लाई जिउँदो सहिद दिवसका रुपमा मनाउने प्रबन्ध मिलाओस् । आगामी चुनावको रणनीतिका लागि मामाका छोराछोरी, सालासाली, भाइबहिनी, फुपूका छोराछोरीलगायतलाई पत्रकारितामा आकर्षित गराएर उनीहरुलाई भोट बैंकका रुपमा उपयोग गर्न सके जिउँदो सहिदको सम्मान हस्तान्तरण हुनसक्ने मेरो निष्कर्ष छ । आफ्ना इष्टमित्र, बन्धुबान्धव र कुलकुटुम्बलाई पत्रकारिता अध्ययन गराउने ‘मिसन’ जारी नै छ । तर दुःखको कुरा, यो पेसाप्रति मेरा आफन्तहरु कत्ति पनि आकर्षित छैनन् । मलाई पनि विकर्षित गर्न हरतरहले लागिपरेका छन् । म विरासतका रुपमा प्राप्त भएको जिउँदो सहिदको सम्मान छोडेर उनीहरुको सल्लाह कसरी स्वीकार गरुँ ?
नयाँ नेतृत्वको आगामी कार्यकाल स्वर्ण बन्न सकोस् । सम्पूर्ण नवनिर्वाचित पत्रकार मित्रहरुलाई हृदयदेखि नै शुभकामना प्रकट गर्दै यो चुनावी ह्याङओभर यहीँ क्लोज्ड गर्न चाहन्छु । तीन वर्षपछि अहिले पाएको सम्मान हस्तान्तरण गर्ने सामथ्र्य जिउँदा सहिदमध्ये कतिले राख्छन्, त्यतिबेलासम्म विश्वमा के–के भइसक्ने हो, जिन्दगीको के भर छ र….?